Gịnị bụ eriri azụgharị? Kedu otu esi eji ha na ngwaahịa ndị eji eme ihe? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Gịnị bụ eriri azụgharị? Kedu otu esi eji ha na ngwaahịa ndị eji eme ihe?
Mpempe akwụkwọ eji emegharị eji arụ ọrụ bụ ụdị eriri ejiri mee na karama eji ekpofu ahịhịa, plastik na uwe site na ijikọta usoro kemịkalụ na nke anụ ahụ na usoro ịgba. Ọ na - agbagha isi iyi akụrụngwa, na-ewepụta ihe ndị na-emebi ihe, emeputa eriri ohuru nke yiri nke izizi mbu, ghotara ijikota nke ahihia, imegharị ihe na ọnụego ojiji dị elu.
Ọ dịghị mfe ịkwadebe eriri azụ eji emegharị ọzọ, nke tumadiputara site na uzo ahu na uzo. Icalzọ anụ ahụ na-ezo aka na ntụgharị anụ ahụ na mpempe karama ahụ n'ime eriri ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ site na mwepụ a wụrụ awụ. Ugbu, enwere ụzọ abụọ :(1) na-eme ka mpempe karama banye n'ime akụrụngwa; (2) A na-ebu ụzọ gbanye karama ahụ ma ọ bụ irighiri ihe (granulation), a na-eme ka ahụ ma ọ bụ irighiri ihe na-agbanye ma na-asọpụ n'ime eriri. Ngwongwo ihe eji emeputa ihe nke ihe emere site na usoro aru aru adighi nma, ọ na-esikwa ike izute ụkpụrụ textiles.
Usoro nke kemịkalụ na-emetụta nrụpụta nke polyester agbakere n'ime obere ụmụ irighiri ihe, nke a na-edobe n’ime ibe nchekwa polyester dị elu, nke gha abia n’ime filaments. Usoro ahụ nwere ike ịchọpụta nrụgharị ọzọ. Na ntule ndịiche, ụzọ kemịkalụ na-amalite nwayọ nwayọ n'ihi mmachi uru, akụrụngwa na nhazi. Ya mere, A na - ahụta ihe ka ọtụtụ n’ime ụlọ nke iji mpempe akwụkwọ PET a nụgharịrị arụ site na usoro anụ ahụ.
At present, ọchịchọ ahịa nke ijikọ ngwaahịa na-agbanwe site na ịdị elu na ọnụ ala dị ala na teknụzụ, ejiji na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ya mere, mmepe nke ụlọ ọrụ mkpuchi dị iche na mmepe na ntinye nke ak�Ugbu aeriri ọhụrụ. At present, ma ahịa ụlọ na nke ndị mba ọzọ, ndị mmadụ nwere mmasị karịa karịa ịrụ ọrụ, carbon dị ala, akwa ndi mara nma na gburugburu ebe akwa, ya mere eriri eji eji eme ihe nwere ezigbo ihe eji eme ihe eji eme ihe.
Ikpe ahụ gosipụtara
1. A na-anakwere akwa akwa akwa na-eji polyamide / ndị a na-emegharị emegharị / spandex ahụ eji egwuri egwu na uwe elu egwuregwu.. Ọdịdị flex ya nwere akụkụ anọ nwere ihe siri ike, nke nwere ike zere mmega ahụ dị oke egwu nke na - eme ka ị na - emegharị ahụ n'oge mmega ahụ ma na - edozi oke ahụ mgbe ọ na - aatingụ.
2. Zoo polyester mmeghari ohuru (75 D) ekike adighi akwa, nke nwere gburugburu ebe obibi na carbon dị ala, nnabata mmiri na iru mmiri, na ezigbo ekwenti, nwee nguzogide na nguzosi ike.
3. Ejiri Swedish fox hoodie mee nke eriri polyester nke ajịja na ajị anụ na-achazi na nsị mbụ. A na-eji jaketị ajị anụ ahụ dị mma ma dị mma nwere akwa mkpuchi dị larịị na nke dị larịị dị ọcha. Ejiri ajị anụ mee ụdọ ahụ bụ nke a na-eme site na eriri polyester.
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=ig&sl=en&tk=769474.888434 from this server. That’s all we know. , ma kpaa akwa akwa dị elu na weft na-eji akwa igwe gburugburu ma ọ bụ igwe eji agbado ọkụ dị elu karịa E40, na akwa na ezi drape.
5. Ejiri akwa linin a kpụrụ akpụ 50 ~ 75 D recycled polyester + (40S ~ 70S) jikwaa obere owu yarn ma ọ bụ~50 ~D polyester emegharịgharịster + (nm 50 ~ Nm 80) ajị anụ, crisp na na udagburu elongation.
6, na Santoni (Santoni) SMDJ2T ma ọ bụ E14, Igwe eji eji jacquard ihu abuo, na 50 ~ 75 D polyester emegharịgharị + A na-eji eriri polyamide arụgharị arụgharị nke nwere ihe eji emepụta akpụkpọ ụkwụ silk, nwere ike iputa usoro agba abuo ma obu otutu, polyester emegharịgharị iji melite ike na ụdị akpụkpọ ụkwụ a, maka igwe na-akpụgharị akpụkpọ ụkwụ n’ichepụta ihe na imepụta ihe iji wee nye mmepe.
Maka ama ndi ozo, biko toaa ntị na akụkọ ahụ "Ngwa nke eriri emegharịrị emegharị na nhazi nhazi" na mbipụta nke abụọ nke onye isi ederede na 2020.
Ngwa nke nanomaterials na ịkwa akwa ịrụ ọrụ
Gịnị bụ ụkpụrụ mgbochi nke ihe nkpuchi? Site na echiche nlele iji nye gị ihe omume ọkachamara